- Xampp ဆိုတာ ဘာလဲ?
xampp ဆိုတာကတော့ အခမဲ့ရတဲ့ open source software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ open source ဆိုတာကတော့ နားလည်တတ်ကျွမ်းမယ်ဆိုရင် အဲဒီ software ကို ပြန်ပြင်ရေးခွင့်ပေးထားတယ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
SEO consulting (free) | free seo consultant Myanmar
အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တွေ လက်မလည်တာနဲ့ post မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်လေးကို ကြာသွားပါတယ်၊ post မတင်ဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးကိုတော့ ကူညီချင်တဲ့ စိတ်က အမြဲတမ်း ဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အခု အစီအစဉ်ကို လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ ရမယ့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ပေးချင်တာပါ။
Labels: free-seo-services, free-web-services
SEO tutorials | Ranking, Pagerank, On Page SEO, Off Page SEO
ဒီနေ့ SEO နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ လက်ကျန် SEO ဗဟုသုတလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပြီးရင်တော့ လက်တွေလုပ်ရမယ့် အပိုင်းတွေကို ပြောပြပေးမှာပါ။ ရှေ့ဆက်မသွားခင် အရင် သင်ခန်းစာလေးတွေကို ပြန်ညွှန်းချင်ပါတယ်။
၁။ SEO beginner introduction in Myanmar
၂။ Keyword analysis / research
Keyword analysis, keyword research | seo tutorials
အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ SEO beginner introduction ကို ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် အကြောင်းကတော့ keyword analysis သို့မဟုတ် keyword research ပေါ့ဗျာ။ keyword ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ website ထောင်ပြီဆိုပါစို့၊ အဲဒီ ဝဘ်ဆိုက်က ဘာအကြောင်းအရာအတွက်လဲ ဆိုတာ သိရမယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူသုံးများတဲ့ စကားလုံး အခေါ်အဝေါ်တွေကို သိရမယ်၊ အဲဒီ စကားလုံးတွေကို keyword လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Myanmar Web Designer ကိုပဲ ဥပမာ ထားပြီးပြောပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော်တို့ seo အကြောင်းကို သင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ seo ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အခြေခံ သဘောတရားကို နားလည်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အောက်ပါလင့်ခ်တွေမှာ သွားဖတ်ပေးပါ၊ မြန်မာလိုလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပိုင်းကတော့ website ရေးခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံး အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို တောက်လျှောက် လိုက်လုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ အခု သင်ခန်းစာ ပြီးရင် website တစ်ခုကို ရေးတတ်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒီ post အခုမှတွေ့တဲ့လူတွေအတွက်လည်း အရင်သင်ခန်းစာတွေကို ပြန်ညွှန်းပေးပါ့မယ်။
အပိုင်း (၄) --- Coding footer of Myanmar Web Designer
အပိုင်း (၅) --- jQuery slider တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း (CreateajQuery slider)
ဒီနေ့ video ကတော့ သုံးပိုင်းရှိပါတယ်၊ သုံးပိုင်း ဆိုလို့ လန့်မသွားပါနဲ့ သုံးခုပေါင်းမှ ၂၇ မိနစ်လောက်ပဲ ရှိတာပါ၊ အဲဒီ video တွေကတော့ -
အရင်တစ်ပတ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Designer ရဲ့ main body အပိုင်းကို ချန်ထားခဲ့ပြီး footer ကို အရင် သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ main body ထဲက content တွေကို layout ချ တာကို သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု သင်ခန်းစာကို ဘယ်သူတွေ လိုက်နိုင်မလဲ ?
အခု ပြောပြပေးမယ့် သင်ခန်းစာကိုတော့ အောက်က အပိုင်း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ဖူးတဲ့ လူတိုင်း လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ ...